एउटै सरकार | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डेनिश ड्रेहु ताहिटी तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
एउटै सरकारले कसरी सबै राष्ट्रका मानिसहरूलाई एकतामा बाँध्नेछ? यशैया ३२:१, १७; ५४:१३
कल्पना गर्नुहोस्, संसारभर एउटै सरकार! मानवजातिको लागि यो कत्ति खुसीको कुरा हो। अहिले धेरै मानिस गरिब भएकोले दुःखकष्ट भोगिरहेका छन्‌। अर्कोतिर केही मानिसहरू भने धेरै धनी छन्‌। तर मानिसहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्ने सरकारले सबैको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ। मानिसहरूले यस्तो सरकार कहिल्यै ल्याउन सक्ला?—यर्मिया १०:२३ पढ्नुहोस्।
इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने मानव सरकारहरू आफ्ना प्रजाको राम्रो हेरचाह गर्न चुकेका छन्‌, अझ विशेषगरि गरिबहरूको। केही सरकारहरू भने निर्दयी छन्‌। (उपदेशक ४:१; ८:९) तर सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरले सबै मानव सरकारलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा आफ्नो सरकार स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यस सरकारको शासकले मानिसहरूको साँच्चै ख्याल राख्नेछ।—यशैया ११:४; दानियल २:४४ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरको राज्यले के हासिल गर्नेछ?
यहोवा परमेश्वरले एक असल शासक येशू ख्रीष्टलाई छान्नुभएको छ। (लूका १:३१-३३) पृथ्वीमा हुनुहुँदा येशू मानिसहरूलाई मदत गर्न इच्छुक हुनुभयो। राजाको रूपमा उहाँले सबै राष्ट्रका मानिसहरूलाई एकतामा बाँध्नुहुनेछ र दुःखकष्टबाट छुटकारा दिनुहुनेछ।—भजन ७२:८, १२-१४ पढ्नुहोस्।
के सबैले येशूलाई शासकको रूपमा स्वीकार्नेछन्‌? अहँ, स्वीकार्ने छैनन्‌। तर यहोवा धीरजी हुनुहुन्छ। (२ पत्रुस ३:९) येशूलाई शासकको रूपमा स्वीकार्ने मौका उहाँले मानिसहरूलाई दिइरहनु भएको छ। येशूले चाँडै खराब मानिसहरूलाई यस पृथ्वीबाट हटाउनुहुनेछ र संसारभर शान्ति र सुरक्षा ल्याउनुहुनेछ।—मीका ४:३, ४ पढ्नुहोस्।